Ny teatra dia ampiasaina ho toy ny fanentanana dokambarotra McDonald vaovao | Famoronana an-tserasera
McDonald's dia zatra manao fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana doka mamaky tany sy mahavita mitondra zava-mahatalanjona tahaka antsika iray noforonin'ny maso ivoho alemà Leo's Thjnkn Thanks.
Ny marina dia mampino ilay hevitra ary raiso ny endrik'ilay Big Mac malaza "hazavaina" amin'ny inona ny fivarotana sy boaty. Mahagaga ny fampielezan-kevitra ary ilay mpamorona izay naka sary an-tsaina azy tao an-dohany, dia tokony hitehaka avy eto isika.
Ny zavatra iray hafa dia ny fihinan'ny trano fisakafoanana haingam-pandeha any am-boalohany isaky ny roa isaky ny telo ny hamamin'ny zava-pisotro misy anao misy siramamy betsaka. Fa raha mandeha amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo isika, toy izao ao no ampiasaina ny french fries hamela anay ho gaga, na ity iray ihany miaraka amin'ireo GIF tsy manam-petra ireo, ny marina dia eo am-panatanterahana izany izy ireo.
Ity fanentanana amin'ny doka ity dia misy andiana sary izay ilay sary manokana "evoke"r an'ny sasany amin'ireo burger azy ireo. Ny fitaovana ho an'ny firafiny dia teatra ao aminy izay ahitanao ireo fivarotana, boaty ary sisiny mandrafitra ireo tranobe kanto sy zava-kanto ireo.
Afaka naneho ny herin'ireto hamburger ireto ilay masoivoho tamin'ny teny filamatra izay anaovany izany mametraka ny "burger amin'ny endrika kanto indrindra", "Symphony ho an'ny fahatsapanao", ary "noforoninao indrindra." Toy ny hoe tototry ny fromazy ny burger, dia eo fotsiny ny salady sy ny hena ...
Miandry izahay izao ny fanentanana doka manaraka izay ahitana ireo singa mampiavaka azy ny ankamaroan'ny ekena dia ampiasain'ny masoivohon'ny fanaovana dokambarotra izay anomezana maimaimpoana ny fisainana sy ny fahaiza-mamorona. Tsy mitsahatra mampitolagaga anay izy ireo, koa maniry bebe kokoa izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny fampielezan-kevitr'i McDonald amin'ny resaka maso
Fandaharam-potoana tany am-boalohany hiverina any an-tsekoly